Madaxweyne Deni oo sheegay in Guddiga Madaxa banaan uu ku guuldareystay qabashada Doorasho qof iyo Cod ah.
Siciid Cabdullaahi Deni Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland oo Warbaahinta hadal siiyay wuxuu ku eedeeyay Guddiga madaxa banaan ee Doorashooyinka dalka inay ku guuldareysteen doorasho qof iyo cod ah.
“Madaxda Dowlad Goboleedyada waxa ay isla garteen in aan go’aan telefoon looga gaari Karin xal u helista doorashada, sidaas waxaa lagama maarnaan ku noqday shirka 9-ka bishaan ka dhacaya Dhuusamareeb, Guddiga doorashooyinka waxa ay si cad u sheegeen in aysan dhici Karin doorasho qof iyo cod ah, waxaa la huri waayay in xal siyaasi ah la gaaro, sababtoo ah waxaa la hirgelin waayay go’aan dastuuri ah” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu rajo ka muujiyay in Madaxda Dowlad Goboleedka HIr-Shabeelle, Puntland, Koofur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug oo gogasha dhigtay ay isla gartaan xalka doorashada.
Sidoo kale 27-kii Bishii June, Golaha Shacabka waxaa hortagtay Guddoomiyaha Guddiga madaxa banaan ee Doorashooyinka oo ka hor dalbatay bilooyin dheeraad ah oo ku eg August, si ay dalka uga hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah.